कोरोनाविरुद्धको खोप ५० प्रतिशत प्रभावकारी भए महामारीलाई जित्न सकिन्छ : विशेषज्ञ डा. फउसी Canada Nepal
कोरोनाविरुद्धको खोप ५० प्रतिशत प्रभावकारी भए महामारीलाई जित्न सकिन्छ : विशेषज्ञ डा. फउसी
भाद्र १ २०७७
काठमाडौँ। विश्वले प्राणघातक महामारी कोरोनाभाइरसको सामाना गरिरहेको बेला संसारभरका वैज्ञानिकहरु यसविरुद्धको खोप विकास गर्न रातदिन खटिरहेका छन्। अमेरिका, बेलायत, भारत र विश्वका अन्य मुलुकहरु यस भाइरस विरुद्धको खोपको अन्तिम परिक्षणमा रहेको थुप्रै संचार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
रुसले स्पुतिनिक नामक खोपको विकास गरेर विश्वलाई नै चकित पारेको छ। रुसले कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप निर्माण गरेर आफूलाई खोपको विकास गर्ने पहिलो देश बताउँदै आएको छ।
यसैबीच, अमेरिकाका वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अन्थोनी फउसीले अर्को वर्षको शुरुवातमा कोरोनाविरुद्धको खोप विश्वमा आउनेमा आशावादी रहेको बताएका छन्।
त्यसैगरी, उनले यदि कुनैपनि देशले निर्माण गरेको खोपले आधा अर्थात् ५० प्रतिशत पनि प्रभाव गर्छ भने एक वर्षमा विश्वलाई फेरि सामान्य अवस्थामा फर्काउन मद्दत हुन्छ।
रुसको भाइरसविरुद्धको खोपको बारे बोल्दै उनले सो खोप सुरक्षित र प्रभावकारी हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।
भाद्र १, २०७७ सोमवार १८:४२:०२ बजे : प्रकाशित